News Collection: मिस नेपाल सृष्टि श्रेष्ठ
मिस नेपाल सृष्टि श्रेष्ठ
बेलायतमा ब्यबसायीक मोडलिङमा संलग्न भइसकेकी यस बर्षकी मिस नेपाल सृष्टि श्रेष्ठ चर्चा छ यतिखेर शहरमा । कतिपयले उनी चोरबाटोबाट प्रतियोगितामा छिरेको आरोप लगाइरहेका छन भने कतिपयले उनको सुन्दरताले मिस वल्र्डमा केही गरिपो हाल्छ कि भनेर आश गर्न थालेका छन् ।
आगामी असारमा चीनमा आयोजना हुने मिस वल्र्डमा सृष्टिले सहभागीता जनाउनेछिन नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै । औशत नेपालीको भन्दा बढि उचाई र आर्कषक प्रस्तुतीले उनबाट आश गर्नेको कमी छैन यतिखेर । सृष्टिले गएको दुई बर्षमा बेलायतमा गरेका मोडलिङ तस्वीर:
सृष्टि श्रेष्ठ सन् २०१२ की मिस नेपाल बनाउने उत्तर कुन थियो ? सेमिफाइनलमा उनले कस्तो प्रश्नको उत्तर कस्तो दिएकी थिइन् ? फाइनल प्रश्नमा दोस्रो र तेस्रो हुनेको उत्तर चाहिँ कस्तो थियो ? भिडियो हेर्नुस्